दलान नेपाल : भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दुतको रुपमा एस जयशंकर किन काठमाडौ आउदै छन ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दुतको रुपमा एस जयशंकर किन काठमाडौ आउदै छन ?
at 11:47 AM Posted by Dalan
संविद्यानसभाले नयां संविद्यान पारित गरेको दुई दिन पछि शुक्रवार विहान ९ वजे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दुतको रुपमा भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर काठमाडौ आउदै छन । विहिवार विहान मात्रै नेपाल स्थित आफनो राजदुतलाई भारतीय पक्षले दिल्ली वोलाएका थिए । दिल्ली जानु अघि भारतीय राजदुत रन्जित रे राष्टपति रामवरण यादवलाई भेटेका थिए । रे दिल्ली पुगेको केहि घण्टामै भारतीय विदेश सचिव जयशंकरको काठमाडौ यात्राको समाचार वाहिर आएको थियो । गएको सोमवार मात्रै भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले एक वक्तव्य जारी गर्दै नेपालका प्रमुख दलहरुलाई मधेश र थारुहरुको जारी आन्द्योलनलाई लचकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । नयां संविद्यानको प्रक्रिया प्रति असन्तुष्टि पोख्दै मधेशी पार्टीहरु आन्दोलनमा होमिए पछि मधेश पुर्वी देखि पश्चिम सम्म गएको १ महिना देखि आन्द्योलनरत छन । मधेशमा जारीआन्द्योलनको क्रममा अत्यद्यिक हिंसात्मक घटनाहरु भए पनि सरकारी पक्षहरु वार्ताका लागी खासै गम्भिर पहल गरेको देखिएन । वरु गृहमन्त्री देखि प्रमुख पार्टीका शिर्ष नेतृत्वहरु जारी आन्दोलनको खिल्ली उडाउन मै व्यस्त थिए । प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रुपमा दुई चोटी पत्र पठाए पनि वार्ताका लागी खासै चासो नै नदिएको मधेशी पार्टीहरुका शिर्ष नेताहरु बताउने गरेका छन । मधेशमा हिंसात्मक घटनाहरु हुनासाथ भारतीय पक्षहरुले गम्भिर चासोहरु देखाएका थिए । टिकापुर घटनाको भोली पल्ट भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालालाई फोन नै गरेर सवैलाई समेटेर अघि वढन सुझाएका थिए । काठमाडौ स्थित भारतीय राजदुतले गृहमन्त्रीलाई भेटेर जारी आन्दोलनको वारेमा कुराकानी गरेका थिए । अघिल्लो शुक्रवार भारतीय राजदुतले एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेरै जारी प्रक्रिया केहि दिनका लागी स्थिगीत गरेर वार्ता गर्न सुझाए । तर प्रमुख दलहरुलाई पनि आलटाल गरेर दिन स्थिगीत त गर्यो तर वार्ताको खासै पहल गरेन । यती सम्मको गएको सोमवार भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले दिएको वक्तव्यलाई लाई समेत काठमाडौमा आफनै ढंगले व्याख्या गरियो । भारतीय राजदुतले वुधवार काठमाडौ स्थित सम्पादकहरुलाई वोलाएर तपाईहरुले वक्तव्यलाई वंगाएको गुनासा मात्रै पोखेनन वरु आफनो स्टयान्ड पनि प्रष्ट पारे । त्यसको भोली पल्ट अर्थात विहिवार उनी दिल्ली उडे ।
काठमाडौमा के गर्छन जयसंकर ?
काठमाडौमा उत्रे लगतै उनी याहाका प्रधानमन्त्री, राष्टपति सहितको उच्च राजनितीक तहको भेटघाट गर्ने छ । जसमा उनले पछिल्लो अवस्थामा वारे भारतीय प्रधानमन्त्रीको धारणालाई राख्ने छन । दिल्ली स्थित स्रोतका अनुसार जयशंकरले प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई दुई दुइ चोटी दिएको आश्वासनको सम्झना गराउने छन । कोईरालाले मोदीलाई पछिल्लो घटनाक्रमको वारेमा टेलिफोनमा आश्वास्त पारेका थिए । स्रोतका अनुसार जयसंकरले कोईरालालाई त्यस वारेमा मोदीको सन्देश दिनेछन । कोईरालाले मोदी हामी सवै लाई जसरी भए पनि मिलाएर अघि वढने आश्वासना दिएका थिए । खासगरी मधेशमा आन्द्योलन चर्किए पछि कोईरालाले आफुहरु सहमती गरेरै अघि वढने वताएका थिए ।
त्यस पछि जयसंकरले हाल काठमाडौमा फिजाइएको हल्ला, भारत नयां संविद्यान जारी गर्नमा अवरोध सिर्जना गरीरहेको वारेमा आफनो स्टयाण्ड राखने छन । दिल्ली स्रोत भन्छन, भारत नेपालको दुवै संविद्यानसभाको चुनाव गराउनमा भुमिका खेलेका छन अनि उनले संविद्यान जारी गर्न अवरोध गरीरहेको छन भन्ने काठमाडौ फिजाइएको हल्ला वारेमा याहाका नेताहरु त्यो कुराको अवगत गराउने छन । उनले भारत नयां संविद्यान जारी होस भन्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट सन्देश दिने छन तर मधेशमा अस्थिरता उत्पन्न भए पछि नेपालकै आन्तरिक राजनितीक झनै अस्थिीर रहने र त्यसले भारतलाई पनि अत्यद्यिक प्रभाव पार्ने भएकाले मधेशलाई साथमा लिएर वढने सुझाउने छन । खासगरी प्रमुख दलहरुले वार्ताको नाममा चासो नै नदेखाएको सन्र्दभमा उनले प्रमुख दलहरुलाई वार्तामा तत्काल सक्रिय हुन आग्रह गर्ने छ । खासगरी नेपालको जारी राजनितीक घटनक्रमलाई लिएर दिल्ली पछिल्लो केहि दिन यता अत्यद्यिक गम्भिर रहेको स्रोतहरुको दावी छ । स्रोत भन्छन, मधेशमा आन्दोलन सुरु भएर र काठमाडौ नयां संविद्यानको प्रक्रिया सुरु हुदा पनि भारतलाई अवस्था यती गम्भिर अवस्थामा पुग्ला भन्ने आकंलन थिएन । किनकी प्रधानमन्त्री स्तरमै दुई दुई चोटी यो विचमा आश्वासन दिइएको थियो, १६ बुदे सहमती लगतै दिल्ली भ्रमणमा गएको वेला काग्रेस नेता शेर बहादुर देउवा र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्याहा प्रधानमन्त्री देखि लिएर सवै पक्षहरु संग आफहरु असन्तुष्ट मधेशी पार्टीहरुलाई जसरी भए पनि सहमतीमा ल्याएर अघि वढने आश्वासना दिएका थिए ।
त्यसैलै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दुतको रुपमा शुक्रवार काठमाडौ आउन लागेका जयशंकरले काठमाडौलाई आफनो औपचारिक धारणा राख्दै छन । जुन आफैमा महत्वपुर्ण देखिन्छ । किनकी आउदो आइतवार संविद्यानसभाले संविद्यान जारी गर्ने समय तोकि सकेको छ ।